Mogadishu Journal » Dagaal gobolka Gedo ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo Al-shabaab
Dagaal gobolka Gedo ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo Al-shabaab
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaano ka tirsan Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayan in dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Dowladda oo ay wehlinayaan Ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab uu ku dhexmaray deegaano hoostaga degmada Garbahaareey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Dagaalka ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaanada Maykaareebey iyo Iimey oo Qiyaastii 20 Km dhinaca Waqooyi kaga beegan Degmada Garbahaarey Ee Xarunta Gobolka Gedo,waxana la sheegay in dagaalka labada dhinaca uu khasaaro kasoo gaaray.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii deegaanadaas ay weerar ku qaadeen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya oo ka warhelay weerar kaga soo wajahay dhinaca Al-Shabaab,sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegayaan in mararka qaarkood weli la maqlayo rasaas ay isku ridayaan labada dhinac,iyada oo weli saraakiisha Ciidamada Dowladda aysan ka warbixin dagaalkaas.
Al-Shabaab ayaa warar ay dhankooda ku qoreen Baraha internet-ka waxa ay ku sheegeen in dagaalka ay la galeen ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya ay ku dileen Saddex askari oo ka tirsan Ciidamada Jubbaland.